“Ma ahan inaan cafis weydiisto Luis Enrique ama uu isaga i weydiisto” – Jordi Alba – Gool FM
“Ma ahan inaan cafis weydiisto Luis Enrique ama uu isaga i weydiisto” – Jordi Alba
(Barcelona) 13 Nof 2018. Xidiga kooxda Barcelona Jordi Alba ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id, kadib markii uu ka maqnaa liiska xidigaha xulka qaranka Spain tan iyo markii uu xulka la wareegay Luis Enrique.
Luis Enrique ayaa ka reebay Jordi Alba liiska xidigihiisa labadii kulan lasoo dhaafay ay la ciyaareen xulalka Croatia iyo Bosnia.
Laakiin Jordi Alba ayaa haatan dib ugu soo laabtay liiska xidigaha xulka qaranka Spain waxaa wax laga weydiiyay waxyaabo badan, waxyaabihii uu ka hadlayna waxaa ka mid ahaa:
“Waa run inaan u mahadceliyo qof walba ee ii muujiyay jacayl, iyo sidoo kale warbaahinta, waxaan dareemayaa in xilli ciyaareed fiican aan qaadanayo”.
“Waxaan halkan u imid inaan caawiyo xulkeyga, Ramos waa saaxiib fiican, inkastoo aan si toos ah u dagaalano, hadana xili kasta xiriirkeena aad ayuu u fiicnaa, waa shaqsi wanaagsan”.
“Luis Enrique wax badan ayuu iga caawiyay, ma aanan ka helin daqiiqado badan la shaqeyntiisa, hadana ma dhahayo erey xun, waxaan u maleenayaa inuu yahay qof aad u fiican, wuxuu gaaray go’aamadiisa”.
“Wax badan ayuu iga caawiyay aad ayaan ugu faraxsanahay, sidoo kale waan ku faraxsanahay inaan markale dib ugu soo laabto liiska xulka qaranka Spian, ma jiraan waxaan ka qoomameynayo, waxaan muujiyay rabitaankeyga ah inaan ciyaaro”.
“Ma doonayo inaan cafis weydiisto, ama uu isaga i weydiisto waa madaxweynaha sheegaaya ciyaartoyda imaaneysa, go’aanka isaga ayaa iskaleh waxaan doonayaa inaan weligeey sii joogo”.
Wakiilka Alexis Sanchez oo xiriir la sameeyay mid ka mid ah kooxaha waaweyn ee La Liga